Ibhisikidi lethu eliyindilinga elenziwe ngemifino lenziwa ngofulawa we-premium organic, ugaywa ukolweni okhethwe ngokucophelela wase-Australia, kanye nemifino eminingi enomsoco. Ngemishini yokucubungula esezingeni eliphakeme kanye nobuchwepheshe obumnandi be-bhisikidi elinamafutha aphansi, inamafutha amancane futhi ine-calcium ephezulu futhi ifomu lezinto zokusetshenziswa.It icebile ngezinto ezahlukahlukene ezidingeka emzimbeni womuntu. Amakhasimende akhangwa umbala wawo omuhle, ukunambitheka okwe-crispy nemifino. Futhi kulula ukuphatha nokugcina iphakethe lakhona elincane futhi elihle. Futhi sinamandla okuthuthukisa ukunambitheka okusha okuhlukile kwalolu chungechunge ngokuya ngezidingo zamakhasimende nezimakethe.
Amabhisikidi Ojikelezo Yemifino
Ibhisikidi lethu eliyindilinga elenziwe ngemifino lenziwa ngofulawa we-premium organic, ugaywa ukolweni okhethwe ngokucophelela wase-Australia, kanye nemifino eminingi enomsoco. Ngemishini yokucubungula esezingeni eliphakeme kanye nobuchwepheshe obumnandi be-bhisikidi elinamafutha aphansi, inamafutha amancane futhi ine-calcium ephezulu futhi ifomu lezinto zokusetshenziswa. Inothile ngezinto ezahlukahlukene ezidingeka emzimbeni womuntu. Amakhasimende akhangwa umbala wawo omuhle, ukunambitheka okwe-crispy nemifino. Futhi kulula ukuphatha nokugcina iphakethe lakhona elincane futhi elihle. Futhi sinamandla okuthuthukisa ukunambitheka okusha okuhlukile kwalolu chungechunge ngokuya ngezidingo zamakhasimende nezimakethe.
Izithako (I-anyanisi Usawoti ukunambitheka):
ufulawa kakolweni (Australia ukolweni) (60%), ushukela ohlanganisiwe, uwoyela wemifino, isanqante (5.1%), ukunciphisa, i-glucose, ama-chives (2.2%), isame, isiraphu yemithombo, i-maltodextrin, isitashi, iqanda, usawoti, izithasiselo zokudla (i-sodium i-bicarbonate, i-phospholipids, i-dihydrogen phosphate disodium, i-beta carotene, i-sodium metabisulfite), imvubelo, utamatisi (1.5%), u-anyanisi (1.3%), isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi (0.8%), i-coriander (0.8%), isipinashi (0.5%), i-broccoli ( 0.5%), iklabishi lamaShayina (0.5%), imifino eluhlaza (0.4%), izinongo ezidliwayo.
Uhlobo lomkhiqizo: ibhisikidi elinzima
Incazelo: 90g * 30 izikhwama / ama-CTN
Iphakheji: Izikhwama zangaphakathi, Amabhokisi angaphandle. (Cishe amabhokisi angama-900 ngesitsha ngasinye se-GP engama-20.)
Impilo eshalofini: Izinyanga eziyi-10
Isitoreji: Indawo epholile neyomile, gwema ilanga eliqondile noma izindawo ezinomswakama.
Isitifiketi: HACCP, ISO9001: 2005
Izici zama bhisikidi azungezile wemifino
Imifino ehlukahlukene ixubekile, icebile ngezinto ezahlukahlukene ezidingeka emzimbeni womuntu
Idizayini yokupakisha elula, inhle kakhulu
Langaphambilini Ama-bhisikidi we-Crispy
Olandelayo: I-Hawthorn Lollipop
Izinti Zebhasikidi Lebhotela Noshizi
Ibhisikidi yokugaya ukudla
Izingane Amabhisikidi, Amaphakethe Esoso Soy, I-Hawthorn Strip, Induku entsha ye-Bean Curd, Ikhukhi leLadyfinger, Ukudla Amakinati Anosawoti,